Cudur Aan Wali La Garan Oo La Dilaacay Shiinaha Iyo Dad Badan Oo Uu Soo Ritay Cudurkaasi – Awdaltoday
Tirada dadka uu soo ritay fayraska ee dalka Shiinaha ayaa ka badan tan rasmiga ah ee ay saraakiisha dalkaas soo saareen, sida ay saynisyahanadu u sheegeen
Labo qof ayaa la ogyahay inay u dhinteen caabuqa, oo bishii December lagu arkay magaalada Wuhan.
Sheybaarka waxaa fulisay Xarunta MRC ee taxliilisa cudurrada infekshanka sababa ee dunida oo saldhiggeedu yahay magaalada London, taas oo la talisa dowlado ay ka mid tahay UK iyo Ururka Caafimaadka Addunka.
Dalalka Singapore iyo Hong Kong ayaa baaritaan ku sameynaya rakaabka diyaaradaha ka yimaada Wuhan, Mareykanka ayaana Jimcihii ku dhawaaqay tallaabooyin kuwaas la mid ah oo laga sameynayo garoomada San Francisco, Los Angeles iyo New York.
Maxaa tan loola jeedaa?
Prof Neil Ferguson oo ah saynisyahan cudurrada dillaaca ku takhasusay ayaa yiri “weli maaha xilli la walwalo” balse toddobaad kahor aad ayuu uga walaacsanaa fayraska.
Saraakiisha Shiinaha ayaa sheegay inaysan jirin kiisas fayraska ah oo ay dadku is qaadsiinayeen caabuqa.
Taa beddelkeed, waxay sheegeen in caabuqu uu ka yimid xayawaanno jirran oo ku sugnaa suuqa Wuhan.
Prof Ferguson ayaa ku doodaya: “Dadku waa inay xisaabta ku darsadaan suurtogalnimada ah in dadku oo isku gudbiya caabuqa ay ka daran tahay sida uu haatan xaalku yahay.
Caabuqyada Coronavirus waxay ka tirsan yihiin caabuqyada kale, balse keliya lix ka mid ah (kan cusub ayaa toddoba ku ah) ayaa saameyn ku yeesha dadka.
Caabuqa ayaa sababay in pneumonia ay ku dhacdo qaar ka mid ah bukaannada.
Maxay khubarrada kale yiraahdeen?
Dr Jeremy Farrar, oo ah agaasimaha hay`adda baaritaanka caafimaad ee Wellcome ayaa yiri: “Waxyaabo badan ayaa la filayaa inay ka soo baxaan caabuqan.
“Hubanti la`aan iyo farqi tirada u dhaxeeya ayaa jira, balse way caddahay inay jiraan dad fayraska isku gudbiyay.
“Kiisas badan ayaa laga soo sheegayaa Shiinaha iyo dalal kale, waxaana jira kiisas kale oo la filayo in lagu arko dalal kale.”
Prof Jonathan Ball, oo wax ka dhiga Jaamacadda Nottingham, ayaa yiri: “Waxa dhab ahaantii muhiimka ah waa in la ogaado in baaritaannada badan ee sheybaarrada lagu sameynayo ay adkeyneyso in la isu geeyo tirada saxda ah.
Raaligelin La Siiyey Mayirkii Hore Ee Borama Maydhane+Se Maxay Tahay Sababtu?